နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Ben 10 Omniverse Final Clash
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Ben 10 Omniverse Final Clash
ထိန်းချုပ်ရေး: View intruction in Ben 10 Omniverse Final Clash Game to play.
ကစား: 30,055 tag ကို: Ben 10 Omniverse, Ben 10 Omniverse games, Final Clash, ben 10 fighting, Warlord Gar, Khoros
ben 10 အန္တိမတပါးအင်အားသုံး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းဘင် 10 ပန်းခြံအများအပြားမိကျောင်းနှင့်ဒိုင်နိုဆော facing, Jurassic Park က လာ. , သူစိုးရိမ်ရေမှတ်ထဲကချောမွေ့နိုင်ရခဲ့သလဲ စွန့်စားဂိမ်းကစားသမားကကြိုးစားရန်လိုပေမည်။
ben 10 အဆုံးစွန်သေဆုံးနားမှာ
ဘင် 10 မြို့မှာဖုတ်ကောင်စစ်တိုက်ရန်ရှိသည်။ ဘင် 10 သေနတ်ဘေးအန္တရာယ်ကနေမြို့ကယ်ဖို့ရေလွှမ်းမိုးဖုတ်ကောင်ချွတ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကိုအသုံးပြုသည်ကိုကူညီပါ။
ben 10 လွတ်မြောက်
ဤသည်ကလေးတွေသည်အကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းကနေဘင် 10 ထွက်ပေါက်ကိုကူညီပါ။
ben 10 omniverse ပိရမစ်
ဒီဘင် 10 Omniverse ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမြေပေါ်တွင်ဘင် 10 စွန့်စားမှု, ဘင် 10 ခြောငျးမြားစှာသောအန္တရာယ်များရှိပါတယ်အဖြစ်သတိပြုရကြမည်, မိကျောင်းကိုသတ်နဲ့လမ်းကိုကူညီရှာဖွေ။ လက်နက်တွေပြောင်း 1,2,3,4,5 keys ကိုသုံးရွှေ့ဖို့မြှား keys ကိုသုံးပါ
ben 10 လမ်းအမျက်ဒေါသ
မိမိအထရပ်ကားများနှင့်ကားများအတွက် Ben10 အဖြစ်အဆင့်ဆင့်ကတဆင့်လူမျိုး, နောက်တစ်နေ့အဆင့်ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်သုံးစွဲဖို့လိမ္မော်သီး orbs စုဆောင်းဖို့အဆင့်အပြီးသတ်လာမည့်ကားသော့ဖွင့်ဖို့မောင်းသောအထည် orbs စုဆောင်း! အဖြစ်လျင်မြန်စွာသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်!
ben 10 humongous ပြေး
ဒီအချိန် Omnitrix အရေးယူသို့ရဖို့ Humungousaur ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ သင့် task တွင်းထဲသို့ကျသွားမရှိဘဲလိုရာခရီးရောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရန်သူများကို dashing အားဖြင့်အပိုရမှတ် Get
ben 10 ဟယ်လိုဝင်းမျိုးနွယ်
သငျသညျအခမဲ့အဘို့သင့်ကို browser အတွက်ဘင် 10 ဟယ်လိုလူမျိုးကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဟယ်လိုပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာဘင်သို့မဟုတ် Gwen အဖြစ်မောင်းနှင့်လမ်းအပေါ်ဂျက်-o-မီးအိမ်စုဆောင်းပါ။ ဆုကြေးငွေမှတ်ရဖို့နဲ့ဂိမ်းအနိုင်ရမှအစာရှောင်မောင်းပြန်လှန်နှင့်ရှေ့လှန်တူ position နဲ့ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်!
သူ့ကိုတတ်နိုင်သလောက်အများအပြားအသီးအပွလျှော့ချဖို့ဓါးကို အသုံးပြု. ဘင် 10 ကိုကူညီပါ။ ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့အသီးအပွမထိကြဘူး !!!